Iindaba - Zithini Iidoli Ezalwe ngokutsha?
Oonodoli abazalwe ngokutsha banobomi obungakholelekiyo, oonodoli abenziwe ngesandla abathe bathandwa ngokubanzi ngabaqokeleli kunye nabathandi ngokufanayo kulo lonke elaseMelika naphesheya kwezilwandle. Ukuqokelela oonodoli kuye kwaba yinto yokuzonwabisa ebanzi ethathe umhlaba ngoqhwithela, njengoko abalandeli bekhangela ezona zinto zinokuthenjwa, ezintle nezizodwa zokuthenga nokugcina ngonaphakade.
Ekudalweni kwasekuqaleni kwii-1980s nasekuqaleni kweminyaka yoo-1990, ukusukela kwiminyaka yabo yokuqala, abantu abaninzi baye bathandana nezi ntsana zithandekayo, ziyamangalisa kwaye ziyinyani ezizelweyo ezinokuqokelelwa, kuthengiswe, kuthengiswe, kuboniswe kwaye-kunjalo-kuthandwe. Eyaziwa ngokusemthethweni njengoonodoli abazalwe ngokutsha okanye iintsana ezizalwe ngokutsha, oonodoli abafunwa kakhulu zezona zifana ngokuphawulekayo neentsana ezisandul 'ukuzalwa. Esi siphumo sokwenyani sifezekiswa ngokubumba ngesandla iiReborn ezivela kwizinto ezahlukeneyo ze-vinyl okanye zeplastiki kwinkqubo enzima kunye nexesha elinzima elibizwa ngokuba yi "reborning." Oonodoli abakumgangatho ophezulu bahlala betyholwa ngokuba ngabantwana abaphilayo-ngakumbi abo bangaqhelananga noonodoli okanye xa bejongwa kude. Nokuba ngaba abaqokeleli bagcina i-nursery eneedoli ezahlukeneyo zokwenziwa eziboniswe kwiikhareji zabantwana, iibhedi zabantwana, okanye kwiimeko zokuqokelelwa, amaxesha amaninzi iiReborn nazo zamkelekile kusapho, kwaye ziphathwa ngothando nothando nakweyiphi na intsana enokuvela kusapho lwayo.
Uninzi lwabantu luqokelela oonodoli abazalwe ngokutsha njengowokuzonwabisa okanye njengotyalo mali. Uninzi lwabalandeli beentsana ezizalwe ngokutsha ziqokelela iintlobo ezininzi zoonodoli, kodwa ziya kundixelela ukuba ukuzalwa kwakhona yeyona nto bayithandayo ngenxa yeenkcukacha zothando kunye nomgangatho ophezulu oboniswa ngoonodoli. Ukuqokelela oonodoli yinto oyithandayo onokuyiqala nangaliphi na ixesha ebomini bakho, kwaye uqhubeke iminyaka emininzi ezayo.
Elinye iqela elihlala linomdla woonodoli abazelwe ngokutsha ngabazali abaphulukene nomntwana okanye usana olusandul 'ukuzalwa. Oonopopi abazelwe ngokutsha bayindlela echukumisayo, entle yokukhumbula umntwana wakho olahlekileyo, okanye nanjengesipho somntwana wakho okhule ngoku. Inkqubo yokukrola inzima kwaye xa ingcali yokuzalwa ngokutsha inefoto yomntwana wakho, uya kuba nakho ukuhambelana ngokuchanekileyo neempawu zomntwana nezakho.
Ukuba ukhetha ukungawenzi unodoli osana ozelwe ngokutsha, sikwanayo ingqokelela eyahlukeneyo yoonodoli abagqityiweyo bokuzalwa kwakhona kwabantwana-abafumanekayo ukuba bathumele kuwe kwangoko! Phinda usebenzise igalari yethu kwaye ufumane unodoli womntwana ozelwe ngokutsha othetha nawe! Unodoli ngamnye ubanjelwe ngesandla kwaye uyi-100% eyahlukileyo, isenza ukuba naluphi na usana oluzelwe ngokutsha olufumana kule ndawo ukongeza kuludwe lwakho kwingqokelela yakho.
Ukongeza kukuqokelelwa kweentsana, abantu abaninzi bazifumana bengena kwinkqubo yokwenza eyabo! Kukho indlela elula yokwenza izandla zakho zimdaka kwaye uqale ukwenza oonodoli bakho kukuthenga ikiti yomntwana ozelwe ngokutsha kwi-Ebay. Nje ukuba ufumane ikiti, ungabeka iziqwenga kunye upeyinte owakho umbala kwesikhumba.
Sincoma kuphela ukuzama ukwenza unodoli womntwana ozelwe ngokutsha ukuba unamava, okanye uligcisa okanye ingcweti kwezinye iindawo, njengoko inkqubo yokubuyisa inokuba nzima, ixesha elinzima, kwaye inzima. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuzama, ukudala umntwana wakho ozelwe ngokutsha unokuba ngamava avuzayo, kwaye ikuvumela ukuba wenze eyona ntetho okanye unodoli ofuna ukuyila.
Ufuna ukuba ngumculi womntwana ozelwe ngokutsha?
Ukuba uyakonwabela ukubumba kunye nokupeyinta oonodoli bakho, uninzi lwabantu abazelwe ngokutsha baqhuba ngempumelelo amashishini onodoli osana kwaye babonisa oonodoli babo kwiivenkile ezise-Ebay. Iintsana ezizalwe ngokutsha zithengisa naphi na ukusuka kwi-75 ukuya kwi-1000 yeedola, kwaye kukho intengiso enkulu kwaye ekhulayo kaba nodoli. Uninzi lwabazobi abazelwe ngokutsha benza umgca omncinci weemodeli zoonopopi ezizelwe ngokutsha ezinokuba nzima kakhulu ukuzifumana. Ngokwenza uphando nge-Ebay, unokufumana iivenkile ezizalwe ngokutsha kunye nokuhlaziywa, ubungqina kunye nemifanekiso yeepopi ezintle ezizalwe ngokutsha.
Ukuba ucinga ngokuthenga unodoli wosana ozelwe ngokutsha, khumbula nje ukuba ukupeyinta iintsana ezizelwe ngokutsha yinxalenye ebalulekileyo yenkqubo yokubuyisa. Khangela amagcisa akumgangatho ophezulu kunye nabo bakholelwa ukuba lonke usana oluzelwe ngokutsha lufanelwe luthando kunye nokuqwalaselwa kweenkcukacha njengokulandelayo. Iinwele zomntwana kunye neenkophe yenye yexesha elinomdla lokuyila unodoli, ke nikela ingqalelo kumgangatho wezi zinto. Kuba ezi nkqubo zibaluleke kakhulu, zonke iinkcukacha zingathatha ixesha elide. Sicebisa ukuba unxibelelane nomculi wonodoli wakho ozelwe ngokutsha ngaphambi kokuba uthenge ukuze uxoxe ngezi zinto kunye nabo. Singaphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo malunga noonodoli abazelwe ngokutsha. Siyathemba ukuba uyalonwabela usana lwakho oluzelwe ngokutsha, kuba aba nodoli banokuzisa uvuyo olukhulu kubo bonke ubomi bakho!